Sawirro: Dumarka hoggaamiya dunida - BBC Somali
Sawirro: Dumarka hoggaamiya dunida
Waxaa so badanayay dumarka ku guulaysanayo inay dalakooda ka qabtaan jagooyin sarsare. Waa kuwan sawirrada qaarkood.
Dalka Chile waxaa wareegga labaad ee doorashada ku tartamayo labo haween ah. Mishel Bashlet oo dalkaas maammulaysay 2006-2010-ka ayaa la tartami doonto Evilin Matei. Waa kuwan sawirrada dumarka madaxda ka ah waddamada dunida qaarkood.
Joys Bandha waa qofkii dumar ah ugu hoorrey ee madaxweyne ka noqoto dalalka ku yaalla koonfur Afrika
Madaxweynaha Libeeriya Ellen Johnson Salif, oo 72 jir ah, ayay taageerayaasheeda u garanayaan "gabadha birta ah," iyada iyo labo dumar ah oo kale ayaa ku guulaystay abaalmarinta Nobel. Waxay noqotay haweenaydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqoto qaaradda Afrika
Sheekh Xasina ayaa loo doortay in Bangaladhesh ay mar labaad ra'iisalwasaare ka noqoto sanadkii 2009-ka.
Dadka reery Konfur Kuuriya waxay doorteen madaxweynihii ugu horrey ee dumar ah, Bak Geun-hye, bishii December ee 2012-ka. Aabaheed ayaa horey madaxweyne ugu noqday dalkaas.
Ra'iisalwasaaraha Tayland, Yinglack Shinawatra ayaa si weyn ugu guulaysatay doorashdii ugu dambaysay ee dalkaas. Xisbegeeda Pheu Tay ayaa ka guulaystay xisbigii talada hayay.
Helle Thoming-Shimidt ayaa noqtay ra'iisalwasaarihii ugu horreeyay ee dumar ah ee dalka Denmark. Tan ayaa ka dambaysay doorashooyinkii barlamaan ee sanadkii 2011-ka
Hoggaamiyaha Jarmalka Anjela Merkel ayaa ku caan baxday inay noqotay ruux aad u dabacsan oo dadka dhexgalo.
Madaxweynaha Arjentina Kristina Fernandez ayaa ku guulaysatay doorashooyinkii dalkaas ee 2007-da.